Arrin cusub oo hoteelada Muqdisho ka socota iyo xildhibaanada oo….. - iftineducation.com
iftineducation.com – Ololihii ugu dambeeyay oo lagu kala jiidanayo Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka socda qaar ka mid ah Hotelada Muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda, iyadoo diyaar garow xoogan loogu jiro kulanka berri oo Talaado ah uu Baarlamaanka yeelan doono.
Kulanka berri ayaa qorshihiisu yahay in lagu qeybiyo mooshinka ka dhanka ah Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare C/wali, kuwaasoo ay soo gudbiyeen Xildhibaano fikir ahaan taageersan Madaxweyne Xasan Sheekh.
Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulamo xoogan ay ka socdeen saacadihii u dambeeyay, waxaana ay ujeedkooda ahaayeen sidii Xildhibaanada labada dhinac ay taageero ugu heli lahaayeen.
Inkastoo aanu berri wax cod ah dhici doono, hadana sida qorshuhu yahay waxaa Gudoonka Baarlamaanka uu shaaciyay in la soo gaba gabeyn doono mooshinkan maalinta Sabtida ee taariikhdu tahay, waana maalin si weyn loo sugayo.
Wararka xanta ah ayaa sheegaya inay socdaan balanqaadyo hoose ah oo ay sameynayaan Madaxda, kuwaasoo isugu jira xilal iyo kuwa kale, waana waxyaabaha lagu kala jiidanayo Xildhibaanada.
Gudiyo kala taageersan labada dhinac ee gulufka xoogan u dhaxeeya ayaa ku jira suuqa, si ay u helaan aqlabiyada Baarlamaanka, waxaana la ogeyn sida xaal noqon doono, waxaase la soo sheegayaa warar marba marka ka dambeysa is bed-bedelaya oo ku saabsan Xildhibaankii aad shalay ku ogeyd in Madaxweynaha taageersanaa in laga yaabo in dhinaca Ra’iisul Wasaaraha uu maray.
Lama oga sida xaal noqon doono, waxaase dadku saadaalinayaa in ololaha hada socda uu ka xiiso badnaan doono kii lagu riday Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo 2-dii December ee sanadkii hore uu Baarlamaanka codka kalsoonida kala laabtay, waxaase xusuus mudan in isla bishii Saacid lagu riday in Baarlamaanka u madlan yahay mooshinka kalsooni kala noqoshada Ra’iisul Wasaarihii bedelay ee C/wali Sheekh Axmed Maxamed oo ku beegan 6-da December, waa afar maalmood ka hor hal sano guuradiisa markii xilkan loo magacaabay 10-December iyo afar maalmood kadib markii la riday Saacid Lama oga sida saadaashu noqon doonto .
Wiil ay iska dhaleen Aabe Soomaaliyeed & Hooyo u dhalatay Finland oo Muqdisho la geeyay (Daawo Muuqaal)!!